Imithetho engokurhoxa yombuki zindwendwe iza kusebenza njengesiqhelo xa kubhukishwe emva kukaMatshi 14, 2020.
Kusebenza iipolisi ezahlukileyo kubhukisho kwimimandla yaseTshayina kunye naxa kubhukishwe izindlu zeLuxe okanye zeLuxury Retreats.
Ukubhukishwa kweendawo zokuhlala nokubhukishwa Kwezinto Ezinokonwatyelwa zika-Airbnb okwenziwe ngaphambi okanye nge-14 kaMatshi 2020, nokunosuku lokungena olukwiintsuku eziyi-45 ukususela namhlanje, kusenokurhoxiswa ngaphambi kokungena. Oku kuthetha ukuba iindwendwe ezirhoxayo phantsi kwale polisi ziza kubuyiselwa yonke imali yazo okanye ibe yimali enokusetyenziswa kuhambo elingana nemali eziyibhateleyo (apho imali enokusetyenziswa kuhambo ifumanekayo khona), ababuki zindwendwe baza kukwazi ukurhoxa phantsi kwale polisi ngaphandle kokubhataliswa okanye lingakhange kuchaphazeleke ukuba yiSuperhost kwabo, ibe uAirbnb uza kuyibuyisela yonke imali yabo okanye ibe yimali enokusetyenziswa kuhambo, equka imali ebhatalelwa ukusebenzisa uAirbnb.
Ukubhukishwa kwendawo yokuhlala okanye Kwezinto Ezinokonwatyelwa zakwa-Airbnb okwenziwe emva kukaMatshi 14, 2020 akuzokuqukwa kwipolisi yethu yeemeko ongenakuzinceda, ngaphandle kokuba undwendwe okanye umbuki zindwendwe wosulelwe yiCOVID-19. Iimeko ezinento yokwenza neCOVID-19 ezingekhoyo kule polisi ziquka: ukuphazamiseka nokurhoxiswa kwezothutho; amacebiso nemiqathango yohambo; amacebiso ezempilo kunye nokuhlaliswa wedwa; ukutshintshwa komthetho osebenzayo; nokunye okugunyazisiweyo ngurhulumente—njengemiyalelo yokufuduka, ukuvalwa kwemida, ukungavumeleki kokuqesha indawo ixesha elifutshane, kunye nemfuneko yokuhlala endlini. Ipolisi yokurhoxa yombuki zindwendwe iza kusebenza njengesiqhelo.
Ipolisi yethu yeemeko ongenakuzinceda yenzelwe ukukhusela iindwendwe kunye nababuki zindwendwe kwiimeko ezingalindelekanga ezivela emva kokubhukisha. Emva kokuba kuthwe iCOVID-19 ngubhubhane wehlabathi nguMbutho Wezempilo Wehlabathi, ipolisi yeemeko ongenakuzinceda ayizukusebenza ngenxa yokuba iCOVID-19 kunye nomonakalo ewenzayo ayisezozinto zingalindelekanga. Nceda ungalibali ukuyihlolisisa kakuhle ipolisi yokurhoxa yombuki zindwendwe xa ubhukisha uze ucinge ngokukhetha ukubhukisha onokukwazi ukukutshintsha.
Siza kuqhubeka sikuhlola ukusebenza kwale polisi. Nceda uhlale ulijonga eli phepha ukuze ufumane inkcazelo entsha nehlaziweyo.
Inqaku lethu elisemthethweni liyichaza ngokweenkcukacha indlela iPolisi Yemeko Ongenakuyinceda esebenza ngayo xa kurhoxiswa ngenxa yeCOVID-1…
Ukuze wazi ukuba zeziphi iindlela zokurhoxisa nezokubuyiselwa imali onokukhetha kuzo ngoku, yiya kwindawo ethi rhoxisa ukubhukisha kwakho uz…